Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Kọmitii Nchịkwa Akaụntụ Federal na Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Kọmitii Akaụntụ Akaụntụ na Federal Account
Kọmitii Akaụntụ Akaụntụ na Federal Account
Ndị United States na-abata nzukọ FAAC maka ego N37.76 na ụtụ ego NNPC
Kọmitii Nchịkọta Ụlọnga nke Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ụlọ Akwụkwọ na-eme kwa ọnwa, bụ nke malitere na Tuesday bụ enweghị ihe kpatara ya n'ihi enweghị nkwenye banyere N37.76 ijeri ego ego NNPC gosipụtara.
NBS: Net FAAC na 2017 nọ na N1.73 ọtụtụ nde
Ụlọ ọrụ National Bureau of Statistics (NBS) na-ekwu na òkè Ntuzi Akaụntụ Akaụntụ Federal (FACC) na 36 na 2017 Fiscal Year guzo na N1.73 trillion.
NBS ka ịhapụ akụkọ 179 gbasara akụ na ụba
Ụlọ Ọrụ National Bureau of Statistics (NBS) bụ ịhapụ ka ọ dịkarịa ala akụkọ 179 gbasara ụdị akụnụba dị iche iche n'afọ a.
Federal, states, gọọmentị obodo na-eketa oke N532.7 maka October
Federal, States na Gọọmenti Obodo na October kụziiri N532.7 ijeri nke gosiri nkwụsị nke N25.3 ijeri mgbe e jiri ya tụnyere ihe ha keere na September.
Mbubata na nbudata ihe 41 dọtara $ 10 ego - CBN Chief Godwin Emefiele
Gọvanọ nke Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele ekwuola na Nigeria ejiri ego ruru nde $ 10 na-agbaso iwu iwuchi iwu mbubata na 41.